Sony Xperia 1: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite ụlọ ọrụ | Gam akporosis
Sony hapụrụ anyị ọtụtụ akụkọ na nkwupụta ya na MWC 2019, dika aturu anya. Izu ụka a, tupu ihe omume ahụ amalite, ọ na-agbapụta na akara ndị Japan ga-ahapụ anyị na mgbanwe ụfọdụ dị mkpa, ebe ọ bụ na ha gbanwere aha ha nke ekwentị. Ihe n'ikpeazụ A hụla ya na njedebe ọhụrụ ya, Sony Xperia 1.
Mgbe ọ hapụrụ anyị ngwaọrụ dị n'etiti, akara ndị Japanese na-eweta ọkwa ọhụrụ ya ugbu a. Ọ bụ ihe gbasara Sony Xperia 1. Ekwentị na-ezute ihe a tụrụ anya na ngwaọrụ dị elu taa. Ike, arụmọrụ dị mma na igwefoto dị mma, dị ka ọ dị na mbụ maka Sony.
Enweghi ngwụcha ihuenyo na anyị ahụla na ngwaọrụ ha dị n'etiti na-egosi ọzọ na ụdị a. Oke dị ike nke nso, nke ụlọ ọrụ ahụ na-achọ iji nwetaghachi ụfọdụ ala furu efu n'ahịa ahịa ama ama na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Ha nwere ya gbagwojuru anya, mana o doro anya na ọ bụ ihe atụ emere maka ya.
1 Nkọwa Sony Xperia 1
2 Sony Xperia 1: Otu njedebe zuru oke
Nkọwa Sony Xperia 1
Obi tọrọ ọtụtụ ndị ụtọ, anyị ga-ahụ na Sony ka dị na-eguzogide ọkwa ma ọ bụ oghere na ihuenyo ahụ. Anyị ahụghị otu n'ime atụmatụ ndị a na Sony Xperia 1. Igwe ihuenyo elongated, nke nwere oke onyoonyo ma nwee ike dị ọcha n'ime. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke ekwentị:
Nka na ụzụ nkọwa Sony Xperia 1
Nlereanya Xperia 1
Ihuenyo 6.5-inch OLED nwere mkpebi 4K + na oke 21: 9
Igwefoto na-aga n'ihu 12 MP f / 1.6 OIS Dual Pixel + 12 MP f / 2.4 Wide angle + 12 MP f / 2.4 Optical zoom OIS
Igwe n'ihu 8MP FF
Njikọ Bluetooth 5.0 Dual SIM WiFi 802.11 a / c USB-C WiFi MIMO
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka agụ na NFC Nchedo IP68 Dolby Atmos
Batrị 3.330 mAh na ngwa ngwa
Na ihe nlereanya a, ha na-agba nzọ ọzọ na ihuenyo na nha 21: 9. Dị ka ụdị nke etiti ya, ụlọ ọrụ ahụ belatalarị akụkụ nke ekwentị ahụ. Nke a na - enye ohere ka Sony Xperia 1 a rute anyị n’ihu ihuenyo a enweghi ngwụcha. O doro anya na, ọ na-abịa dị ka oké nhọrọ mgbe ọ na-abịa na-ewe multimedia ọdịnaya. Nakwa n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ etinyewo uche pụrụ iche na ụda na ekwentị.
Anyị na-ahụ ụfọdụ ndị na-ekwu okwu stereo, na mgbakwunye na inwe ndakọrịta na Dolby Atmos (dị na Netflix, n'etiti ndị ọzọ). Kedu ihe na-enye ohere imikpu ụda oge niile. Akụkụ dị mkpa mgbe ị na-ewe ọdịnaya na ngwaọrụ.
Sony Xperia 1: Otu njedebe zuru oke
Banyere nkọwa ndị ọzọ, anyị nwere ike ịhụ na ọ bụ elu nke nso. Anyị na-achọta otu nhazi ahụ anyị hụrụ ụnyaahụ na ngwaọrụ ndị ọzọ dị elu dị ka LG G8 ThinQ ma ọ bụ LG V50 5G. Kwuru na nhazi bụ Snapdragon 855, agbanyeghị na nke a, Sony Xperia 1 anaghị abịa na ndakọrịta 5G. Ọ bụghị otu n'ime ihe dị mkpa nke ika Japanese n'oge a, ma ọ bụ ya mere ọ dị ka ọ dị.
Anyị na-ahụ igwefoto nwere okpukpu atọ. Ọ si otú ahụ bụrụ onye mbụ Sony ama ama nwere ese foto atọ n'azụ. Ngwakọta nke ụdị sensọ atọ, ha niile bụ 12 MP. Ọ bụ ezie na ekele maka nchikota a, ị ga - enwe ike iji foto ndị a dị ukwuu were foto dị ukwuu Sony Xperia 1. Ebe ọ bụ na anyị nwere nchikota nke nkuku, akụkụ sara mbara na telephoto na ngwaọrụ ahụ, nke na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma.
Na ihe nlereanya a, enwere naanị otu njikọta nke RAM na nchekwa. Yabụ enweghị ọtụtụ ihe ị ga-eche n'echiche mgbe ịzụrụ ekwentị na ụlọ ahịa. Batrị dị na ngwaọrụ a bụ 3.330 mAh, nke dị obere karịa ndị nke ụdị ya dị n’etiti. Na njikọ ya na nhazi ahụ ma tụlee na ọ bụ ihuenyo OLED, ọ nwere ike ịbụ karịa oke maka ndị ọrụ zụrụ ya.
Otu akụkụ nke ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ n'ezie bụ ọnọdụ nke ihe mmetụta mkpịsị aka. Ọ bụghị n'akụkụ, ọ bụghịkwa n'okpuru ihuenyo ahụ. Na Sony Xperia 1, anyị na-achọta ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'otu akụkụ. Ọ bụ ihe ngwọta nke ụlọ ọrụ ahụ ahọrọla n'ihi ịgbatị ihe ngebichi ya. Mkpebi nke nwere ike ọ gaghị amasị mmadụ niile.
Dịka o meelarị na ụdị etiti abụọ ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ị nyebeghị anyị ozi gbasara mbupụta ahịa ya. Anyị amaghị mgbe a ga-ebupụta ya ma ọ bụ ego ọ ga-enwe mgbe ọ na-akụ ụlọ ahịa. Anyị nwere ike ịtụ anya nchikota nke njedebe dị elu na usoro nke RAM na nchekwa.
Ihe anyị ma bụ na ọ ga-ekwe omume zụta Sony Xperia 1 a na agba dị iche iche. Ndị ọrụ ga - enwe ike ịhọrọ: ojii, isi awọ, ọcha na acha odo odo na njedebe nke akara Japanese.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony » Sony Xperia 1: Akara ọhụrụ ọhụụ (Video)
Sony Xperia 10 na Xperia 10 Plus: Sony dị n'etiti etiti (Video)
Egosiputa ugwo na nbido ya na Spain nke Nokia 9 PureView